Ciidamo Ku Dhintay Qarax Ka Dhacay Degmada Afgooye Ee Gobolka Sh/Hoose.
Wednesday September 06, 2017 - 21:53:24 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya duleedka galbeed ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax khasaara dhaliyay lala beegsaday ciidamo katirsan dowladda Federaalka ee shisheeyaha dalka kusoo duulay la shaqeysa.
Maanta gelinkii dambe ayaa qarax xooggan lala eegtay gaari Tikiniko ah oo ay wateen ciidamo katirsan melleteriga DF-ka xilli ay ku socdaalayeen gudaha degmada Afgooye ee gobolka Sh/Hoose sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah.
Qaraxa oo ahaa Miino dhulka lagu aasay ayaa lala helay gaari Cabdi Bile ah oo ay la socdeen ciidamo, warar lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in dhammaan ciidamadii gaariga saarnaa ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaraxa oo laga maqlay inta badan xaafadaha ay ka koobantahay degmada Afgooye.
Maalin ka hor qarax ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac gaaray ciidamo katirsan DF-ka.
Xarakada Al Shabaab ayaa dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah kula jirta kumanaan ciidamo soo duulayaal ah oo badankood ka socda wadamada Itoobiya iyo Kenya waxayna xarakadu qarka usaarantahay in ay ku guuleysato dagaalka ka socda Koonfurta iyo bartmaha dalka.